RASPBERRY "BRYANSK DIVO": SHARAXAADDA KALA DUWAN, BEERASHADA IYO DARYEELKA, SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Raspberry "Bryansk Divo": sifooyinka, siraha ee beerashada guuleysiga
Bryansk Miracle waa noocyo kala duwan oo rasmado rasaas ah kaas oo hela caanno sii kordhaya. Berry weyn, dhadhan macaan, caraf udgoon leh - dhammaantood waxay ku saabsan tahay geesinimada of our article.
Kala duwan ayaa la soo bixiyay dhamaadkii qarnigii la soo dhaafay oo noqday mid caan ku ahaa 2001. Lahaanshaha bilaashka ah ee foomamka kala duwan, ayaa la abuuray raspberry cusub. Qorayaasha kala duwan ee Evdokimenko S. N. iyo Kazakov I V. 2006 ayaa heley patent si ay xaq ugu leeyihiin soo saarida noocyada kala duwan.
Astaamaha iyo sifooyinka kala duwan ee noocyada kala duwan
Farqiga ugu weyn ee u dhaxeeya Bryansk Diva waa awooda ay u leedahay in lagu adkeeyo heerkulka hooseeya oo si buuxda u rarayso xilli xilli-diiran oo diiran oo ku yaala bartamaha Russia.
The duurka ee kala duwan ee raspberry this yihiin toos ah, semi-sprawling. Waxay leedahay caleemaha dhinaca dheer. Heerkulka geedku wuxuu ilaa 170 cm yahay caleemo adag oo leh cufan cufan oo cufan, midab khafiif ah oo midab leh, oo ku daboolaya qodaxyo badan oo fiiqan.
Caleemaha waa weyn, mugdi sare ee sare iyo iftiin hoose. Ubax waa caddaan, soo ururiyey inflorescences at top of caleemaha.
Ma taqaanaa? Ubaxyada divya Bryansk ayaa hodan ku ah fitamiin C, tannins iyo acids organic faa'iido leh. Iyo shaaha laga helo miraha la qalajiyey iyo ubaxa waxay leeyihiin waxyaalo ka hortag ah iyo waxyaabo kale oo qashinka ah.
Muuqaalka ugu weyn ee kala duwan ee noocyada raspberry this waa nooca berry waaweyn.
Cabbirka berry waa ka weyn yahay raspberries caadiga ah. Qaar ka mid ah nuqullada "Bryansk Diva" waxay gaari karaan 13 g, waxay u eg yihiin qaabka loo yaqaan "kotenok". Midabkiisu waa casaan cad. Dhammaan miraha way ku lug leeyihiin. Kordhi dhererka dhirta oo dhan.
Fruiting wuxuu ku billaabmaa dayrta wuxuuna soconayaa ilaa dhammaadka Sebtembar.
Iyada oo mid ka mid ah raspberry baadiyaha ah "mucjisada Bryansk", marka laga beerto meel fiican iyo daryeel habboon, waxaad ka heli kartaa ilaa 3 kg ee berry. Berry kasta wuxuu leeyahay dhadhan cajiib ah, qabow, oo leh macaan farxad leh.
Wax badan ka baro noocyada kala duwan ee raspberry: "Barnaul", "Cumberland", "Caramel", "Hussar", "Heritage", "Hercules", "Atlant", "Giant".
Kala duwanaanshaha ayaa leh iska-caabbinta celceliska cudurada.
Si aad ah u dalbanaya cudurada fangas. Sidaa darteed, inta badan dhamaadka xilli ciyaareedka caleemaha on duurka gubi iyo dayrta.
Daaweynta xilliga guga ee wakiilada antifungal (Fitosporin ayaa si fiican u muuqday) waxay ka ilaalin doontaa dhirta cudurada intooda badan.
"Bryansk Divo" waxaa loo sameeyey si gaar ah loogu talagalay bartamaha Russia, sidaas darteed, iska caabin ah cimilada qaboobaha waxaa si gaar ah loo dhigay beeraleyda. Kala duwan ayaa kari karta xilliga qaboobaha iyada oo aan wax dhibaato ah gaar ah lahayn haddii uu dhaco dhaxan hoos u -20-25 ° C.
Sida loo doorto geedo marka la iibsanayo: Talooyin
Si loo doorto geedo wanaagsan oo xoog leh waa inay la xiriiraan xanaanada ama badeecada khibrad leh. Geedo adag oo caafimaad leh waa inay ahaataa sidan:
wax ka badan 1 mitir sare;
haysta tiro yar (2-3) caleemo leh jilif khafiif ah;
leeyihiin hal xidid adag oo dabacsan oo leh dhowr xididood oo yaryar.
Waa muhiim! Marka gaadiidka, ku duub xididada dharka qoyan iyo ku duub filimka, ka dibna googoynaya oo ku dhaji dhulka dhulka.
Raspberries - warshad aan qarsoodi lahayn, oo ku kori kara ciidda. Waxa ugu muhiimsan waa in la doorto si fiican, si ay dhirta u leedahay qorrax iyo ilaalin dabaysha.
"Mucjisada Bryansk" waxay u baahan tahay qorrax badan si ay u koraan. Doorashada qorshe, xoogga saari meel ay qorraxdu diyaar tahay galabtii, iyo helitaanka ugu badnaan hawada cusub. Laakiin meel aad u furan raspberry ma aqbalo. Doorashada ugu wanaagsani waxay noqon kartaa xayiraad ku xayndaaban xayndaabka ama derbiyada koonfurta ee dhismayaasha. Tani waxay ka badbaadin doontaa dhirta xoog badan oo dabayl ah, iyo xilliga jiilaalka ayaa dib u dhigaya barafka.
Waxa kale oo aad dhali kartaa noocyo kala duwan oo ah raspberries huruud ah iyo madow ee ku yaal xaafadaada.
Ciidda ugu fiican ee koritaanka raspberries waxay noqon doontaa bac cad ama loamy. On carradu culus, koritaanka ayaa noqon doona mid adag. Jeclaa "mucjisada Bryansk" iyo dhererka biyaha dhulka - in ka yar 1.5 m.
Ka hor inta beerto, geedo iyo carrada waa in la diyaariyaa.
Marka loo diyaarinayo goobta, waa lagama maarmaan in la qaso digada (20-30 kg / sq M), superphosphate (60-80 g / sq M) iyo potassium sulphate (40-50 g / sq. M). Isku dar ah waa in si fiican loogu qastaa ciidda halkaas oo raspberries koraan.
Ka saar haramaha dhammaantiis ama ka hor-daawee carrada leh herbicides (tusaale ahaan, Roundup, Basudin) si aad u nadiifiso aagga hoose ee raspberries.
Haddii aad ku leedahay goobta of ciidda culus, waa inay fududeeyaan by dheeriga ah ee ciid iyo sida balka. Wixii carrada dhoobada, waxaa habboon in la kordhiyo heerka codsiga ee digada ama compost.
Marka hore, gooyn waa in la gooyaa ilaa 0.4 m dhererka. Kadibna ka saar dhammaan caleemaha caleemaha.
Si aad u fiican, xididka seedling waa in lagu rusheeyey in isku dar ah ee dhoobo iyo humus. Hadda geedo diyaar u yihiin beerto.
Beerto waxaa si fiican loo fuliyaa xilliga dayrta ka dib marka ay caleemo saaraan. Beerta xilliga gu'ga ayaa sidoo kale suurta gal ah, laakiin halkan waxaad u baahan tahay inaad soo qaadato waqtiga - isla markiiba ka dib marka cimilada diiran la aasaasay, laakiin ka hor inta casiirku bilaabo inuu si firfircoon u guuro.
Ma taqaanaa? Ruushka, beerka ugu horeeya ee loo yaqaan 'erry curves' waxaa lagu dhisay Yury Dolgoruky, oo ah aasaasaha Moscow. Diiwaanada hore ayaa sheegaya in beertu ay ahayd mid aad u weyn oo dhirta u yimid inay u daaqaan.
Geedo beerto waa ugu fiican ee dabagalka leh qoto dheer oo ah 0.5 m iyo width isku mid ah. Masaafada u dhaxaysa dabka, waxay samaysaa qiyaastii 2 m.
In haraaga waxaa la dhigay humus ugu horeysay ama compost, rusheeyey top of superphosphate, potassium iyo ash alwaax. Isku dar isku dar ah.
Waxaan qabanqaabiyaa geedo. Masaafada u dhexeysa duurka waa inay ahaataa qiyaastii 0.7 m, waa in la beeraa si ay u qarxiyaan xididka xididka.
Waxaan ka buuxin geedo la leh dhulka si ay meertada oo dhan buuxsanto.
Waxaan ku rooreynaa dhulka ku wareegsan geedo iyo ku shub biyo.
Ku shub duurka cusub ee la beeray leh mulch (sida balka, peat, compost). Sidaas darteed, cimilada qoyaanka iyo qallajinta ciidda waa la iska ilaalin karaa.
Daryeelidda noocyo raspberries "mucjisada Bryansk" ma aha mid si gaar ah u adag.
Waraabinta waa lagama maarmaanka u ah raspberries. Xididdadiisa waxay ku yaalaan dusha, sababtoo ah aad bay u nugul yihiin qalajinta.
Heerka biyaha - 2-3 baaldiyo biyo ah hal baadiyaha. Waraabintaas waa inay noqotaa maalin kasta. Xitaa roobabka xagaaga ma bixiyaan qoyaanka lagama maarmaanka u ah duurka, sidaas kadib roobka oo kale ma dhaawici karo si aad ugu shubtid baaldiyo biyo ah oo ku dhex jira raspberries.
Waa muhiim! Gaar ahaan muhiim ah waa waraabiyo inta lagu jiro xilliga jaanta.
Mulching wuxuu ka dhigi doonaa waraabinta duurka yaraa. Dhoobada, peat, compost ama hay 'caadiga ah, ku shubay hoos xididada raspberry, qoyaan qoyaan dhulka. Mulch aad u badan, aad u fiican wuxuu noqon doonaa duurka.
Maadada quudinta gaarka ah uma baahnid.
Sanadkiiba mar sanadkii, biyaha duurka oo leh duufaan - qiyaastii 5-10 litir oo hal baadiyaha ah.
Ka hor inta bilowga Berrito, in July, ku shub ash ash geed at heerka of 200-300 g halkii geed.
Garter si loo taageero
Ka dib markii la beero, rakibaan maqaarka raspberry ee ku yaal geesaha cufnaanta safafka duurka. Ku dhaji siligga si aad uhesho. Xadhiggu wuxuu ku fidsan yahay saddex saf. Marka hore, u samee safka dhexe ee dhererka 1.5 m dhulka. Tani waxay noqon doontaa mid ku filan sanadka kowaad ee koritaanka. Ka dibna ku dar laba saf oo dheeraad ah - hoose (30 cm dhulka) iyo sare (1.5 m). Trellis Tani waxay ku filan tahay raspberries.
Raspberries gooyaa karaa dhowr jeer sanadkii. Ka dib bilowgii xilli sii kordhaya, waxaad jari kartaa ama ka gooyaa laanta hoose ee raspberry. Tani waxay u adeegi doontaa sidii kicin loogu talagalay koritaanka laanta dhinaca iyo muuqaalka kalluunka waaweyn.
Haddii dayrta, ka dib goosashada goosashada ugu horeysay, gooyay laamihii on kaas oo jiri doona ugxan, ka dibna waxaad heli kartaa labaad, goosashada dayrta ee berry.
Dayrta (ee gobollada koonfurta - guga) waxaa lagu talinayaa in ay fuliyaan manjooyin buuxa ee raspberries. Tani waxay sannad walba dib u dhali doontaa duurka iyo la dagaallanka cayayaanka.
Manjooyin buuxa ayaa la sameeyaa iyadoo la qaato budo fiiqan. Dhammaan caleemaha gabi ahaanba waa la gooyaa heerka ciidda, gaduudna waa inaan laga tegin.
Gooyo waa in sidoo kale loo sameeyaa si loo burburiyo caleemaha daciifka ah ama jirran.
Bryansk Miracle waa noocyo badan oo jiilaal-adag, sidaas darteed ma jiraan shuruudo gaar ah oo loogu talagalay jiilaalka. Intaa waxaa dheer, dhamaystirto trimming ee ay duurka xilliga dayrta waxay xallisaa dhibaatada jiilaalka.
"Bryansk mucjisada" - kala duwan oo xoog leh xaaladahayaga, oo leh miro waaweyn oo dhadhan fiican leh. Goobtaada ku samee, marnaba aad uga xun tahay go'aankaaga.